YEYINTNGE(CANADA): Monday, April 26
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများညီလာခံ
ရက်စွဲ ။ ။ ဧပြီလ(၁၄)ရက်၊ ၂၀၁၀ သို့ …နိုင်ငံတကာရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ အကြောင်းအရာ။ ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများညီလာခံသို့တက်ရောက် ပါရန် ဖ်ိတ်ကြားခြင်း ။ (၁) ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ(၂၂/၂၃)ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်း (Buffalo) မြို့၌ စစ်အာ ဏာ ရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ ညီလာခံတရပ်အား ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည် ။(၂) ညီလာခံအား အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည် ။ (က)၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအား အခြေခံကျင်းပသည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးတွင်ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှိ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများအားလုံး တစုတစည်းတည်းစုစည်း၍ တော်လှန်သည့် ဘုံနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချ မှတ်နိုင်ရန် ။ (ခ)စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် တိုက်ဖျက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအား လုံး စုစည်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း၍ ထိရောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မူပေါ်လစီများ၊ တညီတညွှတ်တည်း လိုက်ပါ ဆောင် ရွက် နိ်ုင် သည့်နည်း လမ်းများချမှတ်ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရန် ။ (ဂ)အမျိုးသားတန်းတူရေး ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် ဒီမိုကရေစီ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး လုပ် ငန်း စဉ်များ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်ရန် ။ (ဃ)ခိုင်မာကျစ်လစ်သည့် အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆောင်သော စုဖွဲ့မှုမျိုး ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်း ပြင်ဆင် ရန် ။ (င)၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၃/၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် “ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အား စု များ မဟာဗျူဟာညီလာခံ”မှ ချမှတ်ထားသော နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်(၆)ရပ်အား ဆက်လက်အ ကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်။ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်ရန်။ ထိုနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအားတိုးမြှင့်လုပ် ဆောင်နိုင်ရန် ။ (စ)ရည်မှန်းချက်များ ထမြောက်အောင်မြင်နိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် မူပေါ်လစီများအား မှန်ကန်စွာဦး ဆောင်နိုင်သည့်နိုင်ငံ ရေးအရ စွမ်းဆောင်မှုရှိသည့် ခေါင်းဆောင်များ၊ စုဖွဲ့မှုအင်အားစုများ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ။ (၃) ထိုရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်သော မိမိတို့၏ “စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများညီလာခံ” သို့ တက်ရောက်ပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် ။ ညီလာခံဖိတ်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ - ကိုကိုလေး (415) - 203 0541 / kokophoto@yahoo.com - ကိုရဲထွဋ် (347) – 226 0572 / yehtut@yahoo.com - ကိုထွန်းအောင်ကျော် (607) -339 6054 / hagyaw@gmail.com - ကိုခွန်ထွန်းတောက် (301) – 706 1591 / hkuntheinhtoon@gmail.com - ကိုစိုးမိုး (518) – 522 8253 / soemoe62@yahoo.com - Dr- ခင်စိန် (919) -730 7956 / drk_sein@yahoo.com - ကိုမင်းနိုင် (716)- 715 3329 / bago8888@gmail.com - ကိုစိုင်း (510)- 415 2289 / sai18218@yahoo.com - ကိုဇော်ကိုနိုင် (518) – 772 5038 / zaw_kk@yahoo.com April 14, 2010To:International Burmese democratic forces and friends of Burma who would love to see Burma asafree democratic country.Subject: Invitation of International Burma Democratic Conference for Abolishing Military Dictatorship.International Burma Democratic Conference for Abolishing Military Dictatorship will be held in Buffalo, New York, United Sates of America on May 22-23, 2010.The conference will be held for following aims and objectives: a) To lay out common strategies collectively by the democratic forces inside Burma and abroad for fighting againstasham 2010 Election based on an undemocratic 2008 Constitution. b) To discuss intensively and draw effective strategies and policies by finding common grounds and reaching agreements to fight against the military dictatorship. c) To promote democracy and equal rights and self determination for all ethnic nationalities, to establishafederated state and to progress national reconciliation process. d) To prepare collectively for establishingasolid functional foundation reflecting national characteristics. e) To strengthen and adhere to accomplish six political objectives adopted by the Strategic Conference of the Burma Democratic Forces to Abolish Military Dictatorship held on July3- 4, 2009. f) To promote and shape up the emergence of capable leadership andacollective leading core group to fulfill political objectives and policies adopted at the upcoming conference. 3. We are committed to call this conference for above aims and objectives and you are cordially invited to participate and contribute your leadership for the sake of the citizen of Burma who are suffering under military dictatorship almostahalf century.Conference Invitation Sub-CommitteeHtun Aung Gyaw (607) 339-6054 hagyaw@gmail.comKo Ko Lay (415) 203-0541 kokophoto@yahoo.comYe Htut (347) 226-0572 yehtut@yahoo.comKhun Htun Tauk (301) 706-1591 hkuntheinhtoon@gmail.comSoe Moe (518) 522-8253 soemoe62@yahoo.comDr. Khin Sein (919) 730-7956 drk_sein@yahoo.comMin Naing (716) 715-3329 pago8888@gmail.comKo Sai (510) 415-2289 sai18218@yahoo.comZaw Ko Naing (518) 772-5038 zaw_kk@yahoo.comhttp://buffaloconference.weebly.com/index.html
26 April 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/ad0516j26 April 2010 Yeyintnge Diary Summary only...
အကြတ်နေ့ ဗုံးပေါက် ကွဲမှု အိုစာမာဘင် လာဒင် တည်ထောင် သည့် အယ်ကာယီဒါး လက်ချက် ဟု စစ်အစိုးရ အရာရှိ တစ်ဦး ပြော
ဟိန်းခိုင်ထွန်း ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အနီးတွင်ရှိ သည့် X2O မဏ္ဍပ်အား ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ် အကြာတွင် Freedom News Group မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ သင်္ကြန် အကြတ် နေ့ က ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းသည် အာဖဂန် နစ္စတန် လျှို မြောင်တောင်ကြားများ တွင် အခြေစိုက်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ ကွန်ယက်ဖြန့် လုပ်ကိုင်သည့် အယ်ကာယီးဒါး အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ ၏လက်ချက် ဖြစ်သည် ဟု သူယူဆကြောင်း စစ်အစိုးရ အဆင့်မြင့်အရာရှိ တစ်ဦးက စနေနေ့ က ၀န်ထမ်းများနှင့် တွေ့ ဆုံပွဲ ကို နေပြည်တော် တွင် ပြုလုပ် စဉ် ပြောကြား လိုက်သည် ဟု Freedom News Groupကသတင်းရရှိသည်။ ယခင် တစ်ပတ် စစ်အစိုးရ သတင်းစာများ တွင် လေ့လာသူ တစ်ဦး ဟု ကလောင်အမည်ခံထားသည့် ဆောင်းပါးရှင်က ပြည်ပ အခြေစိုက် အမျိုးသား ညွှန့် ပေါင်း အစိုးရ အဖွဲ့ ၏ ၀န်ကြီး ချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း အပါအ၀င်းပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ရေးကျိုးပမ်းသည့် အဖွဲ့ များ ကို စွပ်ဆွဲထားသည်။ စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၏ တရားခံသည် မည်သူဖြစ်ကြောင်း ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး သီတင်း နှစ်ပတ်နီးပါးကြာသည် အထိ ဖော်ထုတ် နိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။စနေနေ့ က အဆိုပါ အရာရှိ ၏ ပြောကြားချက် သည်နေပြည်တော် ရှိ ၀န်ထမ်းများ အကြား ဆွေးနွေး ငြင်းခုံစရာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နေသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီး နောက် ရဲစခန်း၊ရယက ရုံးများ နှင့် လမ်းဆုံ များ တွင် သတင်းပေး နိုင်ပါက ဆုတော်ငွေများ ချီးမြင့် မည် ဟု ရေးသား ထားသည်။ Freedom News Group မှ ရရှိသော သတင်း တစ်ခုအရ အနောက်နိုင်ငံ သံရုံးတစ်ခု မှ ထိုဗုံးကွဲမှု သည်နိုင်ငံတကာ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ အစည်း များ၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် ဖြစ်သည် ဆိုသည့် လေ့လာချက် တစ်ခုကို စစ်အစိုးရ အရာရှိ များထံ ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းတစ်ပတ် က ပေးပိုထားသည် ဟု သိရသည်။(Freedom NewsGroup မှ ထို သတင်းကို အတည်မပြု နိုင်ပါ) ပြည်သူများက မူ ဗုံးဖောက်ခွဲမှု သည် စစ်အစိုးရ၏ လက်ချက်ဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်နေခိုက် စစ်အစိုးရ ကအယ်ကာယီဒါ ၏ လက်ချက် ဖြစ်သည် ဟု ၀ါဒဖြန့် ချီခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန် မြို့ ရှိ တက္ကသိုလ် ပါမ္ခောတစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ကြောင့် ၁၀ ယောက် သေသည် ဟု စစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဗုံးပေါက် ကွဲ မှု မဖြစ်ခင်တွင် ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီး က ရန်ကုန်ဆေးရုံ အုပ်ကြီး အား အရေးပေါ် ကုသဆောင်များသင်္ကြန် ကာလ အတွက် အသင့် ရှိနေရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ဗုံးပေါက် ကွဲ မှု ပြီးနောက် တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးအစားမှ လက်ပစ် ဗုံး ဖြစ်သည် ဟု Freedom News က ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အမေရိကန် ဗဟိုထောက်လှမ်းရေး ဧဂျင်စီ ၏ မှတ်တမ်း များ အရ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဆော်ဒီအင်ဂျင်နီယာ နှင့် ဘီလျှံနာ သူဌေး အိုစမာဘင်လာဒင် တည်ထောင်သည့် အယ်ကာယီဒါ အဖွဲ့ နှင့် ဆက်စပ်သည့် (သို့ မဟုတ်) အထောက်အပံ့ ရယူထားသည့် အဖွဲ့ အစည်း မရှိ ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းရှိ အစ္စလာမ် အချို့ မှာ အယ်ကာယီဒါး နှင့် ဆက်စပ် နိုင်သည် ဟု နှစ်ထောင်ပြည့် နှစ်အကျော်က နိုင်ငံတကာ သတင်းစာများတွင် ရေးသားခဲ့ဖူးသည်။ အိုစမာဘင် လာဒင် ၏ ကျောင်းနေ ဘက်သူငယ်ချင်း တစ်ဦးမှာ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော် လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖြင့် သာ အသက်မွေးနေ သူ ဟု စစ်ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ ဟောင်း တစ်ဦးက FreedomNews Group သို့ ပြောသည်။အိုစမာဘင်လာဒင် တည်ထောင်သည့် အယ်ကာယီဒါ အဖွဲ့ သည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် အမေရိကန် နိုင်ငံ ရှိ ပင်တဂွန် စစ်ဌာနချုပ် နှင့် ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေး မျှော်စင် များ ကို လေယာဉ် ပျံပေးဆွဲပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့ သည် ယခင်က အာဖဂန်နစ္စတန် တွင် တာလီဘန် များ အုပ်စိုးစဉ်က ကဘူလ်း နှင့် ကန်ဒါဟာတွင် အခြေစိုက်သည်။ ထိုအဖွဲ့ ၏ ကွန်ယက်များ သည် အရှေ့တောင် အာရှတွင် ထိုင်း၊ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုးနီးရှား နှင့် မလေးရှား တို့ တွင် ရှိသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလ ရန်ကုန် ကုန်သွယ်မှု ဗဟိုဌာန နှင့် City Mart တို့ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းသည် နိုင်ငံတကာအကြမ်း ဖက် အဖွဲ့ များ၏ လက်ချက် ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သေးသည်။ ဗုံးပေါက်ကွဲ မှု အပြီး မှ စ၍ စစ်အစိုးရက မီဒီယာ သမား သုံးဦး အပါအ၀င် လူပေါင်း ၇၀ ထက် မနည်း ဖမ်းဆီးထားသည်။ စနေ နေ့ က ရန်ကုန် မြို့ လှည်းတန်း ရှိနေ အိမ် တစ်ခု ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က ၀င်ရောက် စီးနင်းကာ ထိုအိမ် တွင်း နေထိုင်သည့် ကျောင်းသား အချို့ အား ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု မဇ္ဈိ မသတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။www.Freedom News Group .com
အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကိုကျော်ကျော်၏ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု နှင့်ရင်တွင်း ခံစားချက် ……
မြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလလှုပ်ရှားမှုတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောပြည်တွင်း မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့(လူငယ်)လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကိုကျော်ကျော်၏ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု နှင့်ရင်တွင်း ခံစားချက် ……၂၆ ရက်နေ့ တွင် စတင် ပစ်ခတ်ခံရပြီး အလုံ သခင်မြပန်းခြံဘက် ချီတက်နေကြပုံဆရာတော် ဦးနေမိန္ဒ နှင့် မြေသြဇာ အဖွဲ့ဝင်များ -ကျနော်တို့မြန်မာနှိင်ငံမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့တလျောက်မှာ ဒီနအဖရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာတသက်လုံးဒီအတိုင်းကြီး အကြောက်တရားလွမ်းမိုးပြီးနေသွားလို့ မရတော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက ဒီအကျင့်ပျက် အစိုးရကို ပယ်ချဖို.အတွက် လူထုအပေါ် ထာဝရနွေးထွေးမှုပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာကိုအရင်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲတွေသင့်သူကိုတွေ။လိုအပ်တဲ့ပညာယူသင့်တာ ယူဆွေးနွေးသင့်တာ တွေဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို အခိုင်အမာချလိုက်တယ်။ လူထုတရပ်လုံးနှင့်နောင်မျိုးဆက် အားလုံးအတွက်ရှေ့မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးမဲ့-အစတေးခံလူငယ်များနဲ့ သမိုင်းဝင်သာဓုကန်စေတီ (ရွှေပြည်သာမြို့သစ်)မှာ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာ ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး အောက်ပါအလုပ်တွေဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။။(၉-၁-၂၀၀၅)ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ကျောင်းများမှလူငယ်များအားစည်းရုံးခြင်း။ ကျောဘက်တွင် (?) တံဆိပ်နှင့်ရှေ့ တွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်စာများရေးသားထားသော(T-shirt)များအခမဲ့ဖြန်.ဖြူးဝတ်စေခြင်း။ဘောပင်-သော့ချိတ်)များပြုလုပ် ဝေခြင်း။ နအဖ ဆန့်ကျင်စာများအား ကျောင်းဝင်းအတွင်းကပ်ခြင်း။မြို.နယ်များရှိရပ်ကွက်များအတွင်း ဖြန့်ဝေကျဲချခြင်း။အဖွဲ.လူငယ်များနှင့်တွေ.ဆုံဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်းများစဉ်ဆက်မပျက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။။ဒီလိုဖြတ်သန်းလာရင်းနဲ.စက်တင်ဘာသံဃာတော်များဦးဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာဆရာတော်များရဲ.လုံခြုံရေးနှင့်ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးနှင့်ကျောင်းသား လူငယ်ထုတရပ်လုံးပါဝင်လှုတ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ.များနည်းတူတဖက်တလမ်းကပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် (နအဖ) မှလိုက်လံ စုံစမ်းဖမ်းဆီး ဖို့ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာသူတို့ဖမ်းဆီးတာကိုမခံပဲ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ထွက်လာခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဆက်လက် တော်လှန်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းကျန်ရှိတဲ့ ဗကသ၊ (၈၈) နှင့်ကျန်အဖွဲ့အစည်းများ။ပြည်တွင်းရှိလူထုတရပ် လုံးအတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်က ဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်။။စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု တစိတ်တဒေသ … … …(၂၄-၉-၂၀၀၇) - ရွှေတိဂုံအရှေ.ဘက်မုဒ်မှစတင် ထွက်ပြီးဗားကရာလမ်းအတိုင်း။ တဆင့် လှည်းတန်းလမ်းဆုံ မှတဆင့် ရှစ်မိုင်လမ်းဆုံ။ တဆင့်ကျိုက်ဝိုင်း-ဘုရားလမ်း။ တဆင့်ကမ္ဘာအေးဘုရားရင်ပြင်တွင် သံဃာတပ်ပေါင်းစု ဆရာတော်များမှအထွေထွေ တရားများဟောကြားပြီးလမ်းခွဲ …..။(၂၅-၉-၂၀၀၇) - ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့တွင်သပိတ် စခန်းဖွင့်ပြီးယောက်လမ်းအတိုင်းချီတက်။ဆူးလေဘုရားရှေ့ တွင်သံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ ၊ အနုပညာရှင်များ မှ တရားဟောပြီး သိမ်ဖြူလမ်းအတိုင်း။ တဆင့်ပုဇွန် တောင်။ကျောက်မြောင်းတို.မှဖြတ်ပြီးဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံလမ်း။ တဆင့်ကြေးသွန်းဘုရားရှေ့တွင် သံဃာတပ်ပေါင်းစု ဆရာတော်များမှအထွေထွေတရားများဟောကြားပြီးလမ်းခွဲ………။(၂၆-၉-၂၀၀၇) - နေ.လည်(၁၁း၃၀)နာရီခန်.တွင်ကြေးသွန်းဘုရားရှေ.တွင်စုဝေးရောက်ရှိနေသောသံဃာတော်များ၊ ကျောင်းသားများ နှင့်ပြည်သူလူထုအတွင်းသို့စစ်ကားများ။ လုံထိန်းကားများ။ နအဖလက်ကိုင်ဒုတ်(ရပ်ကွက်အတွင်းရှိခိုး၊ ဆိုး၊ နှိုက်)များဦးဆောင်ပြီး အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီး၊ နှိပ်စက်၊ ပစ်ခတ်မှုများလူမဆန်စွာပြုလုပ်လာသဖြင့် ကြေးသွန်းဘုရားအနောက်ဖက်ရှိညောင်တုန်းကျောင်းတိုက်အတွင်း တွင် ဆရာတော်များစုစည်းပြီးအင်အား(၇၀၀၀)ခန့်ဖြင့် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းအတိုင်းထွက်ခွါလာရာ (NLD) ရုံးတွင်းမှသံဃာတော်များနှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်းပါဝင်ချီ တက်ဆန္ဒပြကြရာလမ်းတလျှောက်တွင်နအဖအာဏာမပိုင်များက မိမိတို.ကဲ့သို့.အကြမ်းဖက်ခံရပြီး ကွဲထွက်သွားသောတပ်ပေါင်းစုများနှင့်မစုမိစေရန် လိုက်လံပြီးချီတက်ရာလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းများဖြင့် လိုက်လံနှောက်ယှက်ခြင်း များပြုလုပ်နေသော်လည်းဘုရင့်နောင်လမ်း(ကန္နားလမ်း)ရှိ သခင်မြပန်းခြံရှေထိ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြရာဆူးလေဘက် တက်မည့် ဘက်မှပိတ်ဆို.ထားခြင်းခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းပြောင်းကာ ဘုရင့်နောင်ဘက်သို့ ထပ်မံချီတက်ခဲ့ပါတယ်။အလုံမြို့နယ်ဆင်မင်းဈေးနား အရောက်တွင်ရှေ့နောက်နှစ်ဘက်ညှပ်ပြီးထပ်မံပိတ်ဆို့ခံရပါတယ်။ (၂)မိနစ်အတွင်းလူစုခွဲခိုင်းပြီးပစ်ခတ်။ရိုက်နှက်ခံရပါတယ်။နာရီဝက်ခန်.အကြာတွင်ဆင်မင်ဈေးဘက်မှာ နအဖအရာရှိမှသံဃာတော်များငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်နှစ်ပါးစီသွားခွင့်ပြုပြီးသံဃာတော်များနှင့်လူထုကုိဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။(၂၇-၉-၂၀၀၇)-ကျိုက်ကဇံကွင်းအနီး အထက(၃)ကျောင်းအရှေ့တွင်ဆန္ဒပြကျောင်းသား၊ သံဃာ၊ လူထုအား ဖမ်းဆီး ပိတ်ဆို့ ထားသောစစ်တပ်လုံထိန်းနှင့် စွမ်းအားရှင်များအားပြန်လည်ပိတ်ဆို့ပြီးပြန်လွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်း။ တိုင်ကီ များချပြီးတောချောက်မောင်းထုတ်သလိုထုခြင်းကမ္ဘာမကြေ သီဆိုခြင်းများပြုလုပ်နေချိန်တွင် ခွတ်ဒေါင်းအလံလွှင့်ထူပြီးအင်အားဖြည့် လာရောက်ပူးပေါင်းသော ကျောင်းသားလူငယ်များ။ ကျောင်းကြိုရန် ရောက်ရှိနေသောကျောင်းသား မိဘများနှင့်လူထုအားတာမွေအဝိုင်းထိတ်မီးပွိုင့်ဘက်မှတရကြမ်းမောင်းဝင်တိုက်သတ်။ ပစ်ခတ် ၊ရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်ကာလူစုခွဲဖြိုခွင်းခဲ့သော်လည်း-ကန္နားလမ်းတလျောက်ဆန္ဒပြနေသောကျောင်းသား တပ်ပေါင်းစုနှင့်ထပ်မံ အင်အား ဖြည့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရာ ဆင်မလိုက်အဝေးပြေးဝင်းအနီးတွင်ထပ်မံပစ်ခတ်ဖြိုခွဲလူစုခွဲခြင်းခံရပြန်ပါသည်။၂၅)ရက်နေ့ထိ ချီတက်ရာလမ်းကြောင်းတွင် တစုံတရာနှောက်ယှက်မှုမရှိသော်လည်း (၂၆) ရက်နေ့ (၁၁း၃၀) ခန့်တွင် ကြေးသွန်းဘုရား ရှေ့တွင် သပိတ် စခန်းဖွင့်စောင့်နေကြသော သံဃာတော်များ။ကျောင်းသားများ။ လူထုများ ကြားထဲသို့ တရုပ်နုိင်ငံမှလာဘ်ထိုးထားသော (Faw)ကားကြီး(၆)စီးနှင့်စစ်သားများ၊ လုံထိန်းများ၊ဒိုင်နာလိုင်းကား(၃)စီးနှင့်နအဖ၏ လက်ကိုင်ဒုတ်(ကြံ့ဖွတ်-စွမ်းအားရှင်များ)မီးသတ်ကားအသေး(၂)စီးတို့ဟာ ယာယီသပိတ်စခန်းထဲသို့ တရကြမ်းမောင်း ဝင် ရိုက်နှက်လူစုခွဲခိုင်းခြင်း၊သံဃာတော်နှင့်လူထုတချို့အား ပိတ်ထား ခြင်းများပြုလုပ်နေမှု၊အပေါ်စည်းအပြင်ရှိလူထုများမှ၎င်းတို့အား ဖွင့်ခိုင်းခြင်းကြိမ်းမောင်းခြင်းမျိုးစုံဖြင့် ဖိအားပေးနေခြင်းအပေါ် စစ်အာဏာရှင်ငရဲမကြောက်သူများမှ တဆင့် တိုးပစ်ခတ်ခြင်း။မျက်ရည်ယိုဗုံးခွဲခြင်းဖြင့်ထပ်မံပြုလုပ်လာသဖြင့် သံဃာတပ်ပေါင်းစု၊ ကျောင်းသား၊လူထုသည် ဗဟန်း (၃)လမ်း၊ကြားတောရလမ်း၊ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊အသီးသီးအဖွဲ.ကွဲထွက်ပြီး(၁)နာရီတွင် စတင်လမ်းလျောက်ဆန္ဒပြမည် ဆိုသော်လည်း နအဖ မိစ္တာတွေ၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်အသီးသီး ကွဲထွက်လာသည့်အင်အားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျောက် ဆန္ဒပြမေတ္တာပို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုထွက်ခဲ့တဲ့ ချီတက်ရာလမ်းတလျောက်မှာလည်း ငယ်ငယ်ကစိမ်ပြေး တမ်း ကစားသလိုပဲလိုက်လံနှောက်ယှက် ပိတ်ဆို့မှုများတောက်လျောက်လုပ်လာပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာမေတ္တာပို့ ဆန္ဒပြနေတဲ့တပ်ပေါင်းစုမှာ လက်နက်ဆိုလို့အပ်တိုတချောင်းတောင်မရှိသော်လဲ လိုက်လံနှောက်ယှက်နေတဲ့ဘုရား တည်၊ ကျောင်းဆောက်နေတဲ့ ဘုရားတကာတွေရဲ့လက်ကိုင်ဒုတ် တပည့်ကျော်တွေရဲ့လက်တွေထဲမှာတော့ အသေး ဆုံးနံပါတ်ဒုတ်နဲ့အကြီးဆုံး(40 နဲ.M-16)တွဲထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့လစ်ရင်လစ်သလိုချောင်တဲ့နေရာမှာအပျောက် ရိုက်ဖြိုခွင်းဖို့လိုက်လံနှောက်ယှက်ပိတ်ဆိုမှုတွေလုပ်သော်လဲ သံဃာတပ်ပေါင်းစုချီတက်ရာလမ်းတလျောက်မှာ လူထု ပါဝင်လာခြင်း။ဆရာတော်များကံဆောင်ခြင်းအပေါ် ဝမ်းသာမျက်ရည်ဆို့ခြင်း၊နအဖအကြမ်းဖက်ခြင်းအပေါ်မေတ္တာပျက် ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ဆို့ခြင်းများဖြင့် အားပေးဆုတောင်းမှုများရှိခဲ့ခြင်းများဖြင့် ကံဆောင်သံဃာတော်များ။ ကျောင်း သားများ။ NLD လူငယ်များနှင့်လူထုအတွက် အားဖြစ်ပေါ်လျက် ဆက်လက်ချီတက်ဆန္ဒပြ မေတ္တာပို.ခဲ့ကြပါတယ်။။((( စာကြွင်း - ချီတက်ရာ လမ်းတလျောက်တွင် သံဃာတော်များမှမေတ္တာပို့ခြင်း။ NLDလူငယ်များနှင့်ကျောင်းသား လူငယ်များမှသံဃာတော်များ၏လုံခြုံရေးအတွက် လက်ခြင်းချိတ်ပြီးဘေးဘယ်ညာ ကာရံပေးထားခြင်း။ ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်သောလူထုမှ သံဃာတော်များ လူထုအတွက် နအဖ ကို မေတ္တာပို့အမျှဝေခြင်းအပေါ်နအဖ မှအကြမ်းဖက်သည့် အတွက်သံဃာတော်များနှင့်ဆန္ဒပြပြည်သူလူထုကြီးတို့ ဘုရားခြေတော်ရင်းတွေမှာ သွေးမြေကျကုန်ပါပြီ။ သံဃာတော် များကိုလက်အုပ်ချီပူဇော်ပေးပါ။အားပေးပါ။ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါဟုလမ်းတလျောက် ကြွေးကြော်ကြပါတယ် )))ကျော်ကျော်(တာဝန်ခံ)လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံအကောင်းဆုံး မြေသြဇာ အဖွဲ့www.thebestmanure.orgtbmstk1@gmail.com
ရွေးကောက်ပွဲ ရာသီတွင် မီဒီယာများ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ လက်ကိုင်တုတ် မဖြစ်စေရန် သတိပြုသင့်
မီဒီယာသည် နိုင်ငံရေးကြော်ငြာ မထိုးမိစေရန် ဆရာလူထုစိန်ဝင်း တိုက်တွန်းထား နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ကြမည့် ပါတီဝင် လူပုဂ္ဂိုလ် အသီးသီးတို့၏ အင်တာဗျူးများသည် ဂျာနယ်များ အနေနှင့် အခမဲ့ဝါဒ ဖြန့်ပေးနေခြင်း၊ ကြော်ငြာ ခမရဘဲ ကြော်ငြာ ပေးနေကြခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ဆရာလူထုဦးစိန်ဝင်းက လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေး သတင်းများအား ဖော်ပြပေးနေသည့် ပြည်တွင်း ဂျာနယ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ကိုယ်စား အခမဲ့ ဝါဒဖြန့်ပေးနေသလို ဖြစ်နေသကဲ့သို့ သတင်းထောက်များသည် ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားကာ နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများ၏ လက်ကိုင်တုတ် အဖြစ် အသုံးချခံဘဝသို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်ရှိနေကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ''ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမဆို၊ ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမဆို ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင် လုပ်မှာပါလို့ ပြောကြမှာချည်းပဲ။ ဒီမိုကရေစီရရင် ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောကြမှာပဲ။ အဲ့ဒါတွေက သူတို့တရား ဟောတဲ့အခါ ဝါဒဖြန့်ချိတဲ့အခါမှာ သူတို့ဝါဒတွေကို လိုက်ရေးလို့ မရဘူး။ မီဒီယာတွေအနေနဲ့က ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ ဘယ်လိုမူဝါဒနဲ့လုပ်မယ့်ပါတီတွေလဲ၊ နိုင်ငံရေးပါတီလုပ်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီလူတွေရဲ့ Profile ကို ပြည်သူလူထုသိအောင် လုပ်ပေးရမှာ။ အခုချိန်မှာက ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်မယ့်သူတွေကို တိုင်းပြည်က ဘယ်သူမှမသိဘူး။ အဲ့ဒီလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ Profile ကို ပြည်သူလူထုကသိမှဘယ်သူတွေကို မဲပေးသင့်တယ်၊ ဘယ်သူတွေကို မဲမပေးသင့်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူလူထုက ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြမှာ''ဟု ဆရာလူထုဦးစိန်ဝင်းက လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ်မှတစ်ဆင့် အကြံပြုပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီသတင်းများသည် မည်သူက ဘာပြောသည်၊ မည်သူကဘာလုပ်မည် ဟူသည့် နိုင်ငံရေးသမားများ၏ပြောစကားများကိုသာ ရေးသားဖော်ပြကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းသို့ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ပြောစကားများကို ဖော်ပြရေးသားမည့်အစား နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဝါဒများကို ပြည်သူ အများသိရှိနားလည်အောင် ရေးသားဖော်ပြပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ ၁၉၆ဝပါတီရွေးကောက်ပွဲများတွင် မီဒီယာသတင်းသမားများသည် နိုင်ငံရေးပါတီများသို့သွားကာ အင်တာဗျူးခြင်းမရှိကြောင်း၊ မြို့တော်ခန်းမအောက်တွင် ဖွင့်ထားသည့် သတင်းထောက်အသင်း၌ နိုင်ငံရေးပါတီဝင်နိုင်ငံရေးသမားများကသာ Press Conferenee fhလုလုပ်ကြရကြောင်း၊ ပါတီများ၏ ဝါဒဖြန့်ကြော်ငြာများကို သတင်းထောက် အသင်းသို့ လာပို့ကြရကြောင်း (၁၉၆ဝ)ခုနှစ်၊ ဗမာ့ခေတ်သတင်းစာ၊ အိုးဝေသတင်းစာ၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ သူရိယသတင်းစာများ၏ အတွေ့အကြုံများကို ဆရာလူထု ဦးစိန်ဝင်းက ပြောပြခဲ့သည်။ ''ဆရာတို့ခေတ်မှာ ဦးလှတို့ လူထုဒေါ်အမာတို့က စည်းကမ်းထုတ်ထားတာရှိတယ်။ ဘယ်သတင်းထောက်ကမှ နိုင်ငံရေးပါတီင်္မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ မပါခဲ့ကြဘူး။ ဦးလေးလှရဲ့တူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူကနိုင်ငံရေးပါတီမှာပါခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီပါတီမှာအမတ်ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ဆုံး သူ့ကိုတောင် ဆရာတို့တိုက်က ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ဆရာတို့ခေတ်က စည်းကမ်းတိကျခဲ့တာ'' ဟု ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့သည်။ဖိုးစိုင်း မူရင်း SnapShot News Journal
ပြည်သူကိုချစ်တာလား အာဏာကိုချစ်တာလား '' သီရိမင်းလွင် ''
2010 04 23 - Those wishing to form political parties
http://ifile.it/cogdf6s2010 04 23 - Those Wishing to Form Political Parties Summary only...
http://ifile.it/apwc914Than Shwe Unmasking Burma Tyrant Summary only...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ “ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဦးကျော်သူ” နှင့် ဘားမားပါပါရာဇီ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Yesterday at 9:31pm ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စုစည်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ ထူးထူးချွန်ချွန် ဆောင်ရွက်နေကြသူများအား ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနား တစ်ရပ်ကို လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၂၄.၄.၂၀၁၀ (စနေနေ့) ညနေ (၅း၀၀)နာရီမှ (၇း၀၀)နာရီအတွင်း ကျင်းပခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရဲ့ Citizen of Burma ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ ဆုရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူအား သွားရောက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ရာ ဦးကျော်သူမှ အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည် ဖြေကြားသွားခဲ့ပါသည်။Burma : မင်္ဂလာပါ ဦးကျော်သူ ။ အခု Citizen of Burma အဖွဲ့အစည်းက ချီးမြှင့်တဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရရှိသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီ သတင်းက မှန်ပါသလား ခင်ဗျာ။ကျော် : သတင်းမှန် မမှန်တော့ ကျွန်တော်လည်း မသိသေးဘူး။ ခုနကတော့ မူဆယ် နာရေးကူညီမှုအသင်း ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတယ်။ အင်တာနက်မှာ ပါနေပြီလို့ ပြောတယ်။ ကိုကျော်သူ ၀မ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ အကြောင်းကြားတယ်။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်မှာပြန်ကြည့်တော့ ကျွန်တော် အီးမေးလ်ထဲမှာ ဘယ်သူဆီကမှ ဘာမှ မရောက်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Citizen of Burma ဆိုဒ်ကို ကျွန်တော် ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီမှာ “ ကျော်သူဆုရတယ် ” ဆိုပြီးတော့ စာတစ်ကြောင်းပဲ တွေ့တယ်။Burma : ဆုရတယ်လို့ အဲဒီ စာကြောင်းလေး တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။ကျော် : ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ပိုပြီးတော့ တာဝန်ရှိသွားပြီ။ ပိုပြီးတော့ ဒီထက်မက အများကြီး ပြည်သူတွေကို ပေးဆပ်ဖို့ တာဝန်တွေ ပိုလာပြီလို့ ကျွန်တော် သတ်မှတ်ပါတယ်။Burma : အရင်တုန်းကလည်း ပြည်သူ့ဘက်သား အနုပညာသမားဆိုပြီးတော့ ဆုကို ဦးကျော်သူ ရခဲ့သေးတယ်နော်။ အဲဒီိဆုကို ဘယ်ခုနှစ်က၊ ဘယ်ဌာနကနေ ပေးတယ်ဆိုတာကို မှတ်မိပါသေးလား။ကျော် : ပြည်သူ့ဘက်သား အနုပညာသမားက ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ပေးတာပါ။ အင်္ဂလန်ရောက် မြန်မာပြည်သူတွေ ပြည်သားတွေ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ချီးမြှင့်တာပါ။ အဲဒါ သူတို့ သင်္ကြန်ပွဲလုပ်ရင်းနဲ့ အဲမှာ ပြည်သူ့ဘက်သား အနုပညာသမားဆိုပြီးတော့ ဆုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို ချီးမြှင့်လိုက်တာပါ။Burma : အရင်တုန်းက ဦးကျော်သူက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာသမား ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အကယ်ဒမီဆုတွေလည်း ရရှိခဲ့တယ်။ ဒါရိုက်တာဆုတွေလည်း ရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီ အကယ်ဒမီဆုတွေရလို့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ အခု လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်လို့ ရရှိတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ကွာခြားသလဲ။ ခံစားချက်ပေါ်မှာပေါ့။ ကျော် : ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆု ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားရိုက်တယ်ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်မှုကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ အကယ်ဒမီဆုဆိုတာကြီးကို ရည်မှန်းပြီး သရုပ်ဆောင်ကြတာများတယ်။ ဒီ ဆုရရှိရေးအတွက် သရုပ်ဆောင်ကြတာများတယ်။ ဒီ အခု လူမှုရေးဆုဆိုတာကတော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမှ ရည်မှန်းလို့ မရပါဘူး။ ရည်မှန်းလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် ပြည်သူကနေပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ ဒီ မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ခံရတာ။ အဲဒီတော့ ဒီ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကတော့ မြန်မာရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီဆုနဲ့ အရမ်းကို ကွာဟလွန်းပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုနဲ့လည်း မနှိုင်းယှဉ်အပ်ဘူး။ ဒီ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆုဆိုတာ အင်မတန်ကို အမြတ်တနိုး၊ ကိုယ့်ဘ၀ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် အမြတ်တနိုး ထားရှိရမယ့် ဆုလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ပြီးတော့ အခုပေးတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုဆိုတာ နိုင်ငံတကာ အော်စကာဆုပေးပွဲလို အဲလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ပေးတာကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ဥပမာ - ဒီ ပထမဦးဆုံး စာရင်းအရ (၂၄)ဦးပေါ့လေ။ အသင်းအဖွဲ့အစည်းရော၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ ရဟန်းသံဃာတွေရော (၂၄) ဦးကို ရွေးထားတယ်.။ နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် (၅)ဦးကို ထပ်ရွေးချယ်တယ်။ ဒီ ဆန်ကာတင် (၅) ဦးကိုမှ အခမ်းအနားနေ့မှာ ဆုပေးရမယ့် သူကို ဆန္ဒမဲပေးပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါက အော်စကာဆုပေးတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ အော်စကာဆုဆိုတာကလည်း ဆန်ကာတင် ဇာတ်ကား (၅) ကား ရွေးတယ်။ ဘယ်ကား ဘယ်ကားတွေပါလဲ။ ဒါ မျှော်လင့်ချက် ပေးလိုက်ပြီ။ အဲဒီ မျှော်လင့်ချက်တွေထဲမှာ ဒီကားကတော့ ဟိုကားထက် ဘယ်လိုသာလို့ ဓါတ်ပုံတော်လို့ သရုပ်ဆောင် တော်လို့ဆိုပြီးတော့ ပေးလိုက်တာ။ ဒါကတော့ အင်မတန် မြင့်မြတ်တဲ့ ဆုပေးခြင်း ရွေးကောက်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ Burma : အခု Citizen of Burma ကပေးတဲ့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရရှိတဲ့အခါမှာ ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဒီလူမှုရေး လုပ်ငန်းဆိုတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အောင်မြင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ကျော် : ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း လုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်အနောက်မှာ ရှိတဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားတွေ၊ အလုပ်အမှုဆောင်တွေအားလုံး တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကြတယ်။ အလှူရှင်တွေကလည်း တကယ့်ကို နှစ်နှစ်ကာကာနဲ့ လှူဒါန်းကြတယ်။ လှူဒါန်းကြတဲ့ အတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းဟာ အောင်မြင်လာတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ အတိုင်းအတာမှာ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ထိထိမိမိနဲ့ နာရေးရှင်တွေ ဥပမာ - သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းဆိုရင် ရောဂါဝေဒနာရှိတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေ နောက်အခုဆိုရင် သုခအလင်းစာကြည့်တိုက် စာကြည့်ခန်းတွေ ဖွင့်ထားတယ်။ နောက် ကလေးစာသင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေက အင်မတန်ကို အားတတ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်က ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ မွေးလာတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်း အစိုးရလက်ထက်မှာ ကျွန်တော်တို့က ကြီးပြင်းလာတယ်။ ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ်စာကို အတော်လေး အားနည်းတယ်။ ကျွန်တော် မိဘ အဖေ၊ အမေတို့က အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ ဆရာမကြီးတွေ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော် ညီဆိုလည်း အခု အမေရိကားရောက်နေတယ်။ ကျွန်တော် အမဆိုလည်း ဆရာဝန်မကြီးပါ။ နောက်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကျွန်တော် ဒီအင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံနွေရာသီ သင်တန်းလေးကို ကျွန်တော် အမျိုးသမီး ရွှေဇီးကွက်ကနေပြီးတော့ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာကို ကျွန်တော်က တဖက်တလမ်းကနေ အားပေးမှုတွေ ကျွန်တော် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Burma : ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဒီ နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းရယ်၊ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းရယ်၊ သုခအလင်း စာကြည့်တိုက်တို့အပြင် နောက်ထပ် ဘယ်လိုလူမှုရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ထပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားမလဲ ဆိုတာလေး သိပါရစေ။ကျော် : လူမှုရေး ၀န်ဆောင်မှုဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်တာတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအရ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှ ကျွန်တော်တို့လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အခု နာရေးကိစ္စတို့၊ ဆေးခန်းကိစ္စတို့၊ ကလေးတွေ ပညာသင်တဲ့ သင်တန်းကိစ္စတွေဆိုလည်း သက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ အမြဲတမ်း လာပြီးတော့ စစ်ဆေးတာတွေ ဘာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေက ကျွန်တော်တို့က ထိထိမိမိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပံပိုးမှု မရနိုင်ဘူး။ မရနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာမှာ ရတဲ့ အခွင့်အရေးတိုင်း ထိထိမိမိ အကျိုးရှိအောင် ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပေး အုံးမှာပဲ။ နောက်ထပ် ဖွင့်လှစ်မယ့် သင်တန်းတွေ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း လောလောဆယ် မပြောနိုင်သေးဘူး။Burma : အခု ဦးကျော်သူ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘ၀မှာရော၊ အခုလက်ရှိ ရုပ်ရှင်ရိုက် နားထားတဲ့ ဘ၀မှာရော လုပ်ဆောင်လာနိုင်တာက အချိန်ပိုပေးနိုင်တဲ့ အတွက်လား။ အစကတည်းက လူမှုရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိခဲ့လို့ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာ လား ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါအုံး။ ကျော် : ကျွန်တော် ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းက ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ပေါ့လေ။ အဲဒီ အချိန်ကတည်းက ဒီ နာရေးကူညီမှုအသင်းဆိုတာကို စတင်ခဲ့တယ်။ အဲတော့ ဒီ အနုပညာကို ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်အခုဆိုရင် ဒီ အနုပညာကို ခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ အနုပညာနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ “ကျော်သူ” ဆိုတာကြီးကို ကျွန်တော် ပြန်အသုံးချပြီး ပြည်သူတွေအတွက် ကျွန်တော် ပေးဆပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ပေးဆပ်နေတယ် ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်ကို ဆရာတော်ကြီးတွေက “ ကျော်သူ မင်း .. ဒီဟာကို လုပ်ရမယ်။ ငါတို့ ဘုန်းကြီးတွေလည်း စာအောင်ဘွဲ့တွေ ရတယ်။ ဒီ ဘွဲ့တွေ ရပြီဆိုရင် သာသနာပြုတာ ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့အတွက် မောင်ကျော်သူ မင်းကလည်း ဒီဟာကို လုပ်ပါ ” ဆိုပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်း ကျွန်တော်ကို အားပေးပါတယ်။ ဘဘ ဦးသုခကလည်း ကျွန်တော်ကို အမြဲတမ်း တိုက်တွန်းတယ်။ “ မင်း .. ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကို သိလား။ မသိပါဘူး။ အီတလီ သမ္မတကို သိလား။ မသိပါဘူး။ ချာလီချာပလင်ကို သိလား။ သိပါတယ်။ အေး .. ဒါပဲ။ အနုပညာသမားဆိုတာ ဘယ်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လုပ် အောင်မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းက လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတယ် ” ဆိုတဲ့ ဘဘရဲ့ ဆုံးမ သြ၀ါဒကို ကျွန်တော် အခုထက်ထိ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြုပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။Burma : ဦးကျော်သူက ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာ အပိတ်ခံထားရတယ်။ တကယ်လို့များ လက်ရှိအခြေအနေမှာ နိုင်ငံရဲ့ ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲကြောင့် ဦးကျော်သူ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့် ပြန်ရခဲ့လို့ရှိရင် ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်အုံးမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် သွားမှာလား ဆိုတာလေး သိပါရစေ။ကျော် : အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်ကို ရိုက်ခွင့်ပေးတယ် ဆိုရင်လည်း မရိုက်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် မရိုက်ဘူးဆိုတာ အခုလောလောဆယ် မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေ ပရိတ်သတ်ကို ချပြနေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေက ပရိတ်သတ်အတွက် ဘာ အကျိုးပြုတာမှ မရှိဘူး။ ပရိတ်သတ်အတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဥပမာ - အတ္ထုပတ္တိဇာတ်လမ်းမျိုး၊ သမိုင်းကြောင်းအမှန် ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေတော့ အချိန်ပေးပြီး ရိုက်ပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော် ရိုက်ချင်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စပြီးတော့ အခုချိန်ထိဆိုရင် (၃) နှစ်ရှိပြီပေါ့။အဲလို ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်း ကျွန်တော်ကို ပိတ်လိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ (ဦးကျော်သူမှ နှုတ်ခမ်းတွန့်ရုံ တစ်ချက်ပြုံးပြီး) ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ ကျွန်တော်ကို ဒီလို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက် လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ ပိုပြီးတော့ ဇောက်ချပြီး လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။Burma : ဦးကျော်သူရဲ့ နာမည်နဲ့ Facebook မှာ kyaw thu`s fans ဆိုပြီးတော့ ဆိုဒ်တစ်ခုဖွင့်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုဒ်ဟာ ဦးကျော်သူတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သမျှ၊ လူတွေကို ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက် အားလုံးကို ပြည်သူအားလုံး သိရှိအောင်၊ ကမ္ဘာနဲ့ အ၀န်းကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေကိုရော၊ ကမ္ဘာလူသားတွေကိုရော တင်ပြပေးထားတဲ့ အဲဒီ Fans ဆိုဒ်ကိုလည်း အပိတ်ခံ ထားရတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အဲဒါရော ဟုတ်ပါသလား။ကျော် : ဟုတ်ပါတယ်။ ပိတ်ထားပါတယ်။ ပိတ်ထားတာကလည်း ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပိတ်လည်းတော့ မသိဘူး။ ဒါ ကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာ တင်တဲ့ကိစ္စတွေက နာရေးအခမဲ့ ကူညီပေးခြင်း၊ အခမဲ့ ဆေးကုသ ပေးခြင်း၊ အခမဲ့ ပညာသင်ကြားပေးခြင်း ဒီကိစ္စရပ်တွေပဲ ကျွန်တော် တင်ထားတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်း သဘောအရ လုပ်ငန်းမှာ တွေ့ထိတဲ့ အတိုင်းအတာ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်တင်တာပါ။ နိုင်ငံရေး လှုံ့ဆော်မှု တွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အလကား အခမဲ့ လုပ်ပေးနေရတဲ့ ကိစ္စကို အဲလို ပိတ်ဆို့မှု ဟန့်တားမှုတွေ လုပ်တာတော့ တော်တော်ကို ကျက်သရေ တုံးတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါကလည်း ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမှာပါ။Burma : ဦးကျော်သူ အခု ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို ရသွားပါပြီ။ Citizen of Burma ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်မြောက်လာအောင် ၀ိုင်းပြီးတော့ ထူထောင်ပေးကြတဲ့၊ လှုံ့ဆော်ပေးကြတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေနဲ့ ဦးကျော်သူကို အားပေးနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေရော၊ အလှူရှင်တွေ ရော၊ ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကူညီလုပ်အားပေးနေကြတဲ့ အသင်းသူ အသင်းသားတွေရော သက်ဆိုင်သူ အားလုံးကို ဦးကျော်သူအနေနဲ့ ဘယ်လိုစကားမျိုးနဲ့ ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ချင်ပါသလဲ။ ကျော် : ဒါက ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် ပြောရမယ့် ကိစ္စပါ။ ကျေးဇူးတင်ရမယ့် လူတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ အခုလို ပြည်ပကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဒီလို ပြည်သူလူထုအတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေကို အခုလို ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ပြုလုပ်ပေးနေတာလဲ။ အင်မတန်ကို တန်ဖိုးထားရတဲ့ ကိစ္စပါ။ မြန်မာလူမျိုးအတွက် မြန်မာပီသတဲ့ အလုပ်တစ်ခုလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ဒါ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် အခုလို အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ လူမှုရေးသမားတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးများက ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများကို မြန်မာ ပီသစွာဖြင့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ထက်သန်စွာ လေးလေးနက်နက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို များစွာကျေးဇူးတင် လေးစားဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလည်း ကျွန်တော်ရဲ့ သားနဲ့ သမီးကို ဒီ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က စပြီးတော့ တွေ့ခွင့်မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပက်စပို့စ်တွေလည်း အပိတ်ခံထားရတယ်။ သားရော သမီးရော ဒီကို ပြန်မလာရဲကြဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း မလာခိုင်းတော့ဘူး။ အဲတော့ မိသားစုကလည်း တစ်ကွဲတစ်ပြား ကိုယ့် အနုပညာလုပ်ငန်းကလည်း လုပ်ခွင့်မရ၊ အဲဒီတော့ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ မိုးလင်းတာနဲ့ ကိုယ့် ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် ဓါတ်ဆီထည့် ပြီးတော့ အသင်းကိုလာ။ အသင်းမှာ နာရေးကိစ္စတွေ ကူညီပြီးလုပ်ပေး။ ကိုယ့် ထမင်းကို ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ပေးဝယ်စား။ အဲလို လုပ်နေရပါတယ်။ အဖက်ဖက်က အခက်အခဲတွေ ကြားကနေပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အထဲမှာ အခုလို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ဆိုတဲ့ ဆုကြီးကို ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ အားလုံး၊ ဆန္ဒမဲပေးကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး၊ ကျွန်တော်တို့ မျိုးရိုးထဲမှာလဲ သုဘရာဇာဆိုတဲ့ မျိုးရိုးလည်း မပါ ပါဘူး။ ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကို ကျွန်တော်ကို ရောက်အောင် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖခင် ဦးစိန်တင်နှင့် ကျွန်တော်ရဲ့ မိခင် ဒေါ်မြသန်း မြင်အပ် မမြင်အပ် ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီး ကျွန်တော်ရဲ့ ဘ၀မှာ အခုလို (၃) နှစ် (၃) မိုး ၀င်ငွေမရှိပဲ လူမှုရေး လုပ်ငန်းကို သစ္စာရှိရှိ သီလလုံခြုံစွာ ထမ်းရွက်ပေးမှုကို တဖက်တလမ်းမှ အားပေးကူညီ ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မဟေသီ ရွှေဇီးကွက်နဲ့ ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှ တစ်ဆင့် လူမှုရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိအောင် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့သော ကျွန်တော်ရဲ့ သား ပြည်သိမ်းကျော် (U.S.A)၊ သမီး မြင့်မိုရ်ဦး (Austrilia) တို့ကိုလည်း ရင်ထဲမှာ နှစ်နှစ်ကာကာ အထူးကျေးဇူးတင် ဦးညွှတ်မိပါတယ်။ (၃) နှစ် (၃) မိုး ၀င်ငွေ မရှိပဲနဲ့ ဘယ်လို ရပ်တည်နိုင်သလဲလို့ မေးရင် (၂၅) နှစ် အနှစ် (၃၀) ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ အနုပညာလောကမှ ပြည်သူပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြေးများကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း တိုးပွားအောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ဇနီး ရွှေဇီးကွက်ကိုပဲ ထပ်မံပြီး ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက်နဲ့ လုပ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော် မသေမီ အချိန်ထိ ဒါမှမဟုတ် လူသားတွေ ဘယ်တော့မှ မသေနိုင်တော့မယ့် အချိန်ထိ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ နာရေးကူညီမှု လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်သွားမှာပါ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ (၃၁) ဘုံမှာ ဘယ်ဘုံမှာမှ မရနိုင်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဟု နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူမှ ၄င်း၏ ရင်တွင်းမှ စကားသံများကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။-ဘားမားပါပါရာဇီ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ “ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဦးကျော်သူ” နှင့် ဘားမားပါပါရာဇီ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1164863114&v=wall&story_fbid=111670118871788#!/notes/komyoe-memcache0/-/380903031228
တတိယအရေးတော်ပုံအနီး NLD ပါတီ ၏ တောက်ပသောနေ့ရက်များ (သို့) NLDဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ပန်ကြားလွှာ
အောင်မျိုးနိုင် တတိယအရေးတော်ပုံအနီး NLD ပါတီ ၏ တောက်ပသောနေ့ရက်များ (သို့) NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သို့ပန်ကြားလွှာ ယနေ့နိုင်ငံတကာတွင် ပြည်သူများ၏ ဖိနှိပ်သော အစိုးရများအပေါ် ဆန္ဒပြပွဲများ အဆက်မပြတ်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသည်..Kyrgyzstan (ကာဂျစ်စတန်) တွင် လက်ရှိအစိုးရ ပြုတ်ကျသွားသည်အထိပြင်းထန်ခဲ့သည်...မြန်မာပြည်သူများလည်းနိုင်ငံတကာအခြေအနေကို မျက်ချေမပြတ်လေ့လာလျက်ရှိကြသည် .....မြန်မာပြည်တွင် မတ်လ ၂၉ ရက် NLD ပါတီ မှတ်ပုံမတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေးချိန်မှာ တက်သင့်သလောက် တက်မလာသည့်အပြင်.... ပါတီ ခေါင်းဆောင် တွေက မေလ ၇ ရက်နေ့ ကျရင် ဆိုင်းဘုတ် တွေကို ဖြုတ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အာဏာပိုင် တွေက လာဖြုတ် ရင်တော့ အသာ တကြည် လက်ခံမယ်..ဟူသောစကားများပင် ပထမ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် ....ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှိက ယခုကဲ့သို့လေသံပင်ထွက်မည်မဟုတ်ပါ..... ယနေ့ ၂၆-၀၄-၂၀၁၀ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးမှ .....NLD ဆိုင်းဘုတ်မဖြုတ်၊ အလံမချ ပြည်သူလူထု အကျိုးပြုတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ ဆက်လုပ်သွားမည်.. ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာ ပြည်သူတစ်ဦး .....၈၈၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား တစ်ဦး အနေဖြင့်များစွာ ဝမ်းသာ ကျေနပ်အားရမိပါသည်... ယနေ့ကာလ တွင် နအဖ နှင့် လက်ပါးစေ တယက...ပယက....ခယက...မယက များ သည် လူထုအုံကြွမူ ကို ထိတ်လန့် ၍ NLD ကိုဖျက်သိမ်းရေး ..ပါတီ ဆိုင်းဘုတ် အလံတော်များဖြုတ်ချရေး အတွက် အစီအစဉ်အမံများရေးဆွဲရာတွင် မေ လ ၆ ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်တွင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အလံနှင့်ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချ ရုံးသော့ခတ် ရမည်လား နောက်တစ်နေ့တွင်မှ စွမ်းအားရှင် ကြံ့ဖွတ် လူရမ်းကားလူစုလူဝေးဖြင့် သွားရောက်ရမည်လား ...ပါတီရုံးများသို့သွားရာလမ်းများကို မည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း ....လိုအပ်ရင်တက်ကြွလူပ်ရှားမည့်သူများကိုမည်သို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရမည်နည်း မည်သို့သော ကန့်ကွက်မူ တွန်းလှန်မူ ကြုံတွေ့နိုင်သလဲ ..စသည်များ တွက်ချက်နေရချိန် ယခုကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမှ သည် နောင်လုပ်ငန်းစဉ်များပါ တစ တစ လမ်းကြောင်းဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရာ နအဖ ကို အကျပ်ရိုက်စေမှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါသည်.... သို့ဖြစ်ပါ၍....အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ..... လာဖြုတ် ရင်တော့ အသာ တကြည် လက်ခံမယ် ...ဒါပေမဲ့ ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေ အလံတော်တွေ ဒီရုံးတွေ ဆိုတာက ပြည်သူတွေတင်ထား ဖွင့်ထားပေးခဲ့တာ ...ပြည်သူတွေက ဆိုင်းဘုတ်အလံချ ရုံးပိတ်တာမဟုတ်ဘဲ အာဏာသုံးပြီးလုပ်ဆောင် သူတွေဟာ ပြည့်သူရန်သူတွေဖြစ်တယ် ..ဒါကြောင့်ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်မြို့နယ်က ရုံးကို ဘယ်သူတွေ လာရောက်အလံ ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချတယ်ဆိုတာ ..ရုံးကိုသော့ပိတ်တယ်ဆိုတာ စာနဲ့မှတ်တမ်းတင် ဗီိဒီယို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးအသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွေကတဆင့် ပြည်သူကိုတိုင်တည်အသိပေးရမှာဖြစ်တယ်....ဒီလို လာရောက်လုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုပြည်သူတွေက စွမ်းနိုင်သမျှ အရေးယူဒဏ်ခတ်ပေးဖို့ NLD အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးကို မေတ္တာရပ်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဟု ပြောဆို၍လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန်အစီအမံများချမှတ်ပေးပါရန် ပြည်သူလူထုကိုယ်စား NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲသို့ ပန်ကြားအပ်ပါသည်....ယနေ့ခေတ်တွင်မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံဖြင့်ဆောင်ရွက် ပြီးစီးနိုင်ပါသည်...ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက နအဖ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ယင်းတို့လက်ကိုင်တုတ်များ တုန်လူပ်ချောက်ချားသွားရမည်မှာ လုံးဝအသေအချာပါ...... ပြည်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက် ရင်ဖွင့်ချက် ဆန္ဒ များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်....(၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်သော NLD သည်ပြည်သူလူထု က အာဏာ အပ်နှင်းပြီး ဖြစ်သော နိုင်ငံရေးအဖွဲအစည်းဖြစ်သည်..NLD ကိုပြည်သူကသာ ဖျက်ခွင့်ရှိသည်....နအဖ ဖျက်ခွင့်မရှိပါ.. (၂) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟု ကိုယ့်ကိုကိုရာထူးပေးထားသူဦးစီးသောနအဖ သည်ပြည်သူလူထု ကအာဏာအပ်နှင်းထားသော နိုင်ငံတော်အဖွဲအစည်းမဟုတ်ပါ....ယခုနှစ် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် ..ဖြစ်က အရေခြုံ ပြီးလှည့်ဖြားအုပ်ချုပ်ရန်လုပ်ဆောင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်... (၃) မူလ ရွေးကောက်ပွဲ နှစ် ၂၀ ရှိပြီဖြစ်သော် လည်း မဲပေးခဲ့သော ပြည်သူများ ..ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ....အနိုင်ရ လွှတ်တော်ခေါ်ရန်အသင့်ပါတီအားလုံး သက်ရှိမျက်မှောက်ရှိနေလျက်ပင် တစုံတရာအကောင်အထည်မဖေါ်ဘဲ ယခုကဲသို့လက်နက်အားကိုး မီဒီယာအားကိုးပြီး ဥပဒေအရအလိုအလျောက် ပျက်ပျယ်သည်ဟု စကားလုံးသုံး ကာ အားလုံးချေဖျက်ရုံဖြင့် ပြီးဆုံးသွားခြင်းမျိုးလုံးဝလက်မခံသင့်ပါ..... (၄) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မူဝါဒ သည် မတရားသော အမိန့် အာဏာမှန်သမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ ဖြစ်ပါသည်... (၅) ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာချက်ကိုဆက်လက် ကိုင်စွဲ သည် ဆိုပါက ယင်းကြေငြာချက်သည် ၏ NLD ကြေညာချက်ဖြစ် ၍ မိမိ၏ ကြေညာချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် မိမိ အဖွဲအစည်း နေရာ ရုံး ဆိုင်းဘုတ်အလံတော်များကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားရမည်ဖြစ်ရာ ယခုထက်ပြတ်သားသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီချမှတ်ဖော်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်..ယင်းကိုပြည်သူများကမျှော်လင့်နေပါသည်. (၆) နအဖ က မတရားအသင်းကြေညာပါက မိမိတို့အဖွဲချုပ်မှလည်း နအဖ ၏ အနှစ် ၂၂ နှစ် နိုင်ငံတော်ကိုပြည်သူအာဏာအပ်နှင်းမူမရှိဘဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ရာတွင် စီမံခန့်ခွဲရေး ညံ့ဖျင်းမူ ...ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူ တိုင်းရင်းသား များကို ဆိုးသွမ်းနှိပ်စက်မူ ..မတရားလဘ်လာဘ ခြစား အကျင့်ပျက်မူ ....တို့ကြောင့် ယင်း အာဏာပိုင် နအဖနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် မတရားအသင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူနှင့် နိုင်ငံတကာကိုကြေညာ၍ သူတို့မ်ိမိတို့ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်က သူတို့ဆိုင်းဘုတ်များ ကို ပြည်သူများကလူထုအားဖြင့်ဖြုတ်ချရေးတောင်းဆိုကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ် သင့်ပါသည်.. မတရားသင်းတန်ပြန်ကြေညာခြင်းကို ပထမဆုံးလုပ်သင့်ပါသည်... (ရ) NLD ပါတီဝင်များသည် နအဖ ၏ ဖိနှိပ်ရာ ရဲစခန်း စစ်ကြောရေး အကျဉ်းထောင်နေရာများကို ထိတ်လန့်သူများမဟုတ်ပါ..ထိုအတွက် ပါတီဝင်များကို ပြည်သူများကယုံကြည်လေးစားအားကိုးပြီး ဖြစ်ပါသည်..... ယင်းနေ့ရက်များတွင် ရွှေဂုံတိုင်ဌာနချုပ်ကဲ့ သို့နေရာမျိုး တွင်မထတမ်း နောက်မဆုတ်တမ်းငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ ရန်သင့်လျော်ပါသည်..ယင်းကို နအဖ မှ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမည်ဆိုပါကလည်း ပြည်သူများ ဘက်မှ ဝိုင်းရံပေးနိုင်ဖို့ရန်ယခုအချိန်မှစတင်၍ လူပ်ရှားစည်းလုံးဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်... (၈) ယင်းနေရက်များသည်လူထုလူပ်ရှားအုံကြွမူဖော်ဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသောနေ့ရက်များဖြစ်ပါသည်... ယခင် ၈၈၈၈ နှင့် ရွှေဝါရောင် ......ယခု ၂၀၁၀ တတိယအရေးတော်ပုံကြီးနီးကပ်နေပါပြီ တတိယအရေးတော်ပုံအနီး NLD ပါတီ ၏ တောက်ပသောနေ့ရက်များ ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်..... ဒီမိုကရေစီ ....အရေးတော်ပုံ.....အောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်..... အောင်မျိုးနိုင်(၂၆.၀၄.၂၀၁၀)
အလင်းအိမ်မဂ္ဂဇင်း တွဲ ၄ မှတ် ၄
http://www.mediafire.com/?efeniljzagtLuminary 4of4Summary only...
The Voice Weekly Journal Vol. 6-24, April 26 - May 2, 2010.
http://ifile.it/2sf8pbmhttp://www.mediafire.com/?wqezziubdzyThe_Voice_6-24 Summary only...
စစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြ...
အကြတ်နေ့ ဗုံးပေါက် ကွဲမှု အိုစာမာဘင် လာဒင် တည်ထောင်...
အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကိုကျော်ကျော်၏ စ...
ရွေးကောက်ပွဲ ရာသီတွင် မီဒီယာများ နိုင်ငံရေးသမားမျာ...
ပြည်သူကိုချစ်တာလား အာဏာကိုချစ်တာလား '' သီရိမင်းလွင...
2010 04 23 - Those wishing to form political parti...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ “ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဦးေ...
တတိယအရေးတော်ပုံအနီး NLD ပါတီ ၏ တောက်ပသောနေ့ရက်များ...
The Voice Weekly Journal Vol. 6-24, April 26 - May...